အိမ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သော့များ | Bezzia
တောရက်စ် | 14/05/2022 16:00 | နေအိမ်
အိမ်တွင် မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အရေးကြီးသည်။ စနစ်တကျ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သော အိမ်သည် သုခချမ်းသာကို ခံစားပါ။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အိမ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကို အချိန်ကြာကြာထိန်းသိမ်းထားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏စီးပွားရေးတန်ဖိုး မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ ကောင်းမွန်သောဂရုပြုခြင်းဖြင့် သင်၏အရာများသည် ကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင် ကြာရှည်စွာတည်ရှိနေနိုင်သည်။
နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်မှာ ဖုန်စုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနည်းငယ်ပို၍ နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ် ပွတ်တိုက်ခြင်းကိစ္စမဟုတ်သောကြောင့် သာမာန်အလုပ်များကို ကျော်လွန်၍ စဉ်းစားရပါမည်။ တစ်ခု ကောင်းမွန်သော သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပရိဘောဂများကို ဖယ်ခွာခြင်း ပါဝင်သည်။မထင်ရှားသောနေရာများကို သန့်ရှင်းပါ၊ အိမ်ပိုမိုလှပစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေသော အလှဆင်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အသစ်မွမ်းမံထားသည့်အရာများကို ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
1 နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သော့ ၄ ချက်
1.1 ပိုမိုထိရောက်မှုရှိသော အဖွဲ့အစည်း
နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သော့ ၄ ချက်
အဖွဲ့အစည်းသည် အောင်မြင်မှု၏ သော့ချက်ဖြစ်သည်၊ ဤအရာတွင် သင်လုပ်ဆောင်ရမည့် မည်သည့်တာဝန်ကိုမဆို လုပ်ဆောင်ပါ။ ကောင်းစွာစီစဉ်ခြင်းမရှိဘဲ အရာရာသည် ဖရိုဖရဲဖြစ်သွားသည်၊ ၎င်းသည် အချိန်ပိုကြာပြီး နောက်တစ်ကြိမ် အမြဲကျန်ခဲ့သော ပျင်းစရာကောင်းသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်လာမည်မှာ သေချာပါသည်။ ထို့ကြောင့်, လိုအပ်ချက်များကို ချရေးမည့် လုပ်စရာစာရင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ပရိဘောဂ၏ ထပ်ခိုးများ၊ အံဆွဲများ သို့မဟုတ် အသုံးအဆောင်များ၏ နောက်ကွယ်တွင် မကြာခဏ မသန့်ရှင်းသော အရာများ။
လက်ထဲမှာ အကုန်မရှိစေဘဲ စစချင်းမှာ လိုအပ်တဲ့ သန့်ရှင်းရေး အသုံးအဆောင်တွေ အားလုံးကို ပြင်ဆင်ပါ။ la limpieza။ ရန်ရှိသည် အမှိုက်အိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးက မင်းကိုပစ်ဖို့ ပေးလိမ့်မယ်။ အံဆွဲများတွင် စုပုံထားသမျှ အရာတိုင်းသည် အသုံးမဝင်တော့ပါ။ သန့်ရှင်းရေးထုတ်ကုန်များအတွက်၊ သင်အရာအားလုံးအတွက်ထုတ်ကုန်ကိုသုံးရန်မလိုအပ်ပါ၊ ရေ၊ ဆပ်ပြာ၊ အဖြူရောင်သန့်ရှင်းရေးရှာလကာရည်နှင့်မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါနှင့်အတူလုံလောက်သည်ထက်ပိုလိမ့်မည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့၌ယခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုရှိသည်၊ နက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းရေး၏သော့များကားအဘယ်နည်းများကိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
အံဆွဲများ: မေးခွန်းအတွက် အံဆွဲကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး ၎င်း၏အကြောင်းအရာများကို မြေပြင်ပေါ်တွင် စွန့်ပစ်ပါ။. အံဆွဲကို ရေနွေးနွေးနှင့် ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောပြီး ခြောက်သွားချိန်တွင် အသုံးမဝင်သောအရာများကို စွန့်ပစ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့် သင်သည် အံဆွဲများကို သန့်ရှင်းရေးနှင့် စည်းရုံးရန် အချိန်များစွာ သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ပရိဘောဂများကိုဖယ်ရှားပါ။ပရိဘောဂတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အညစ်အကြေးတွေ အများကြီး စုပုံလာတဲ့အပြင် သူတို့အောက်မှာလည်း ဝင်ရခက်တဲ့ နေရာတွေမို့လို့။ နက်ရှိုင်းသော သန့်စင်မှုရရှိရန် ဤနေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ အလေးချိန်နည်းအောင် ပရိဘောဂတွေကို ဗလာ၊ ၎င်းကိုဖယ်ရှားပြီး ဝှက်ထားသောနံရံ၊ ပရိဘောဂအောက်ရှိ ကြမ်းပြင်နှင့် နောက်ကျောသစ်သားကို သန့်ရှင်းပါ။
ဝေါ: သာမန်မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်ပေမယ့် နံရံနဲ့ မျက်နှာကျက်ထောင့်တွေမှာ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ အင်းဆက်တွေ၊ ပင့်ကူမျှင်များနှင့် အမှိုက်မျိုးစုံ. နံရံများကို အသစ်အတိုင်းထားရန် သန့်ရှင်းသော တံမြက်စည်းပေါ်တွင် မိုက်ခရိုဖိုက်ဘာအ၀တ်ကို ထားရပါမည်။ ဖုန်မှုန့်နှင့် အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပြီး နောက်ဆုံးတွင် အင်းဆက်ပိုးမွှားများ အနီးသို့ ခဏတာ မရောက်စေရန် ရေနှင့် ရှာလကာရည်ဖြူစွတ်ထားသော အဝတ်ကို ပွတ်ပေးပါ။
အိမ်သုံးပစ္စည်းများအစားအစာများကို နေ့တိုင်းပြင်ဆင်ပေးသည့် မီးဖိုချောင်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့ကို သန့်ရှင်းအောင်ထားရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါပေမယ့် အခါအားလျော်စွာ စနစ်တကျ သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုလက်လှမ်းမီမှုနည်းသော ဒေသများသို့ရောက်ရှိရန်။ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ ကြမ်းပြင်နဲ့ နံရံကိုလည်း ဖယ်ရှားပြီး နောက်ကနေ သန့်ရှင်းပေးပါ။ တိုတိုပြောရရင်၊ ပစ္စည်းတွေကို အသစ်အတိုင်းမထားခဲ့ဖို့ အပိုင်းတွေကို စေ့စေ့စပ်စပ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပါ။
အိမ်မှာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ပဲ ခေတ်မီနေပါစေ၊ အဲဒါကြောင့် လုပ်ရမယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဇုန်တစ်ခုစီအတွက် တစ်ရက်ကို အပ်နှံလိုက်ပါ။. ဤနည်းဖြင့် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရာတွင် အချိန်များစွာဖြုန်းခြင်းဖြင့် စိတ်ရှုပ်မခံပါနှင့်။ ပြက္ခဒိန်ကိုစစ်ဆေးပြီး သီးခြားနေရာတစ်ခုကို နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် အပတ်စဉ် တစ်ရက်စီ စီစဉ်ပါ။ အိမ်သန့်ရှင်းရေးသည် ထိုအိမ်တွင်နေထိုင်သူအားလုံး၏တာဝန်ဖြစ်သည်ကို သတိရပါ။ အလုပ်အားလုံးအတွက် သင့်ကိုယ်သင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဖြစ်စေပါနှင့်၊ အလုပ်များကို စုစည်းထားပါက ပြီးပြည့်စုံသောအိမ်မှ ထွက်ခွာရန် သင်အားလုံး အချိန်ပိုယူရပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » အိမ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန် သော့များ